Thomas Tuchel Oo Sheegay Inuu Timo Wirner Kusoo Celin Doono Sidiisii Hore.
Home Horyaalka Ingiriiska Thomas Tuchel oo sheegay inuu Timo wirner kusoo celin doono sidiisii hore.
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu sida ugu fiican uga faa’iideysto weeraryahanka Timo Werner isagoo dhisaya kalsoonida xidiga xulka Jarmalka iyo dib u soo celinta iyo raadinta qaab lagu aasaaso kooxda ka ciyaareysa awoodooda isla markaana u abuureysa fursado isaga.
Chelsea ayaa ka dhigtay Werner inuu noqdo ciyaaryahanka ugu qaalisan Jarmalka taariikhda markii ay kusoo qaateen lacag dhan 47.5 milyan ginni ayna kasoo kasoo qaaten RB Leipzig bishii Juun, waana rikoor ay mar kale ku jabeen isbuucyo gudahood si ay ula wadaagaan ninka ay isku wadanka yihiin Kai Havertz oo ka yimid Bayer Leverkusen.
In kasta oo uu si tartiib tartiib ah u bilaabay, Werner wuxuu helay kabihiisa gooldhalinta bishii Oktoobar wuxuuna dhaliyay 7 gool toddobo kulan oo Premier League iyo Champions League ah Laakiin markii Chelsea ay ku bilaabatay cadaadis ayuu gaabis ka noqday gool dhalintiisii iyadoo sidoo kale kooxda laga ceyriyey Frank Lampard.
Chelsea ayaa si aad ah u go’aamisay in Werner iyo Havertz ay ku guuleysan doonaan Stamford Bridge, qof ku hadla Jarmalka ayaa loo maleynayay inuu yahay mid ka mid ah shuruudaha ay doorbidayaan guusha Lampard Tuchel waa sax taas oo durba indhaha ayuu ku hayaa soo celinta Werner.
Tababaraha cusub ee Chelsea ayaa sharaxay in Werner uu aad u daneeyo wax badan, taasoo la micno ah inuu u muuqdo mid aan awood u lahayn inuu khaladaad sameeyo, fursado uu seegay ama qaab ciyaareed xun ka dambeeyo, taasoo horseedaysa inuu cadaadis kordho naftiisa iyo hoos u dhaca kalsoonida.
Ninkani waa da ‘yar yahay, ninku waa furan yahay, ninku waa saaxiibtinimo ninku wuxuu jecel yahay inuu wax barto. Waqtigan xaadirka ah waxaan arki karaa in wajigiisa uu xoogaa xiran yahay, waxaan arki karaa in culeyska uu saaran yahay garbihiisa. Wax badan ayuu daneeyaa, waxayna muujineysaa inuu leeyahay dabeecad cajiib ah, ”ayuu yiri Tuchel.
Previous articleKooxo badan oo isku heystaan adeega Devid Alaba
Next articleManchester United iyo Arsenal oo bar-baro ku kala baxay, Manchester City oo hogaanka dheereesatay